Famerenana amin'ny laoniny ny dia: Mihaino avy amin'ny Minisitra, mpitarika ny fizahantany ary mametraka fanontaniana
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Famerenana amin'ny laoniny ny dia: Mihaino avy amin'ny Minisitra, mpitarika ny fizahantany ary mametraka fanontaniana
Indonezia sy Eswatini dia mitarika miaraka amin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, ary ireo mpitarika any amin'ny firenena 127 hanarenana ny dia sy fizahan-tany.
eTurboNews Ny mpamaky sy ny mpikamban'ny World Tourism Network dia asaina handray anjara amin'ny Q&A mivantana miaraka amin'ny minisitry ny fizahantany.
Ny resadresaka momba ny Travel Rebuilding dia herintaona ary mitazona ny lohalaharana amin'ny fifanakalozan-kevitra eran-tany amin'ireo mpiara-miombonantoka fizahan-tany avy amin'ny firenena 127.
Ny politikan'ny fampiantranoana, ny sidina, ny fitaterana, ny tontolo iainana ary ny governemanta dia tokony horesahina anio amin'ny besinimaro fanarenana ny dia zaikabe fihaonambe.
Fanarenana.travel manamora ny fifandraisan'ny mpandray anjara amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ny amin'ny ho avin'ny indostria miaraka amin'ireo mpitarika ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ao anatin'izany ny minisitry ny fizahan-tany avy any Indonezia sy Eswatini, miaraka amin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, sy ny maro hafa.
The Ministeran'ny fizahan-tany sy ny toekarena famoronana dia ny minisitera any Indonezia.
HE Sandiago Uno, ny minisitry ny fizahan-tany sy ny toekarena famoronana ao amin'ny Repoblikan'i Indonezia, no ho mpandahateny amin'ny zoma amin'ny Fanarenana ny adihevitra momba ny dia ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.
Izy dia hiteny amin'ny Session Asia, Australia, Europe, Africa amin'ny 7:00 maraina London Time ny zoma 5 martsa.
HE Moses Vilakati, minisitry ny fizahan-tany sy ny tontolo iainana ho an'ny fanjakan'i Eswatini, dia hanolotra ny teny ifotony ho an'ny dinika momba ny fitsangatsanganana faharoa ho an'i Amerika, Afrika ary Eropa amin'ny 6 ora hariva London fotoana.
HE Sandiaga Uno, minisitry ny fizahantany sy ny toekarena famoronana ao amin'ny Repoblikan'i Indonezia
Dr. Taleb Rifai, Jordania, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha
Alain St. Ange, Seychelles, minisitry ny fizahan-tany Seychelles teo aloha
Datuk Musa Hj Yusof, Tale lefitra, Malezia
Deepak Joshi, Nepal, tale jeneraly teo aloha, Board of Tourism an'ny Nepal
Cuthbert Ncube, Afrika Atsimo, filoha, Birao fizahantany afrikanina
Vijay Poonoosam, Etihad Airways teo aloha, Filoha; Komitin'ny fiaramanidina WTN
Dov Kalmann, Israel, mpikambana mpanorina
Rudi Herrmann, Head, WTN Toko Malaysia
HE Moses Vilakati, minisitry ny fizahan-tany sy ny tontolo iainana, Eswatini
Louis D'Amore, mpanorina, Ivotoerana Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany
Dr. Peter Tarlow, manam-pahaizana momba ny fiarovana ny fizahantany
Cuthbert Ncube, filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina
Aleksandra Sasha, Montenegro, Head, Vondrona Balkan WTN
Dr Snežana Štetić, Serbia, Lehiben'ny, WTN Educationa lComm Committee
Profesora Geoffrey Lipman, Filoha, ICTP; SUNX, Belzika ary Malta
Marikar Donato, Federasiona Masoivoho Manokana an'ny Mpizahatany
Max Haberstroh, Alemana
Izay mpandray anjara amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia mety ho tafiditra ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny dia indray ary hiditra ao amin'ny World Tour Network ao www.tv.travel
Ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany any Hawaii ho an'i Maui, Molokai ary Lanai
Misokatra ho an'izao tontolo izao i Seychelles